Soo Iibso Reposts-ka SoundCloud - SoNuker
Faa'iidooyin noocee ah ayaan arki doonaa haddii aan iibsado Qalabka Dib-u-dhigga ee loo yaqaan 'SoundCloud Reposts'
Waxay kaa caawineysaa inaad ku kasbato kalsoonida degdegga ah ee boggaaga iyo qoraaladaada
Ku dhiirrigeliya dadka kale inay la wadaagaan dhagaystayaashooda
Adigu Ha Laheynin Inaad Sharciso Kale Sharciyo Iyo Mawduuc
Natiijooyinku waxay sii wadi doonaan maalin kasta illaa amarkaaga la buuxiyo
Natiijooyinku waxay ku bilaabmayaan 24-72 Saacadood & Waxay ku Dhammaanayaan 5 Maalmood Gudahood
SoNuker had iyo jeer waxay kubixisaa wax ka badan waxaad amartay!
Ma inaan iibsadaa SoundCloud bixinta?
Waa inaad soo iibsato warbixinnada SoundCloud si ay uga caawiso in ay kuugu faafiso ereygaaga muusikadaada iyo waxyaabaha aad ubaahantahay. Waxaan leenahay nuxurkagaaga oo la wadaago dhamaan barnaamijyada warbaahinta bulshada si loo xoojiyo soo dhaweynta muusiggaaga iyo waxyaabaha aad ka kooban tahay. Tani waxay kaa caawineysaa inaad soo jiidato taageerayaasha cusub meelaha aad marnaba horay u soo gaarin.
Adeeggani wuxuu kaa caawinayaa helitaanka koritaanka aad u baahan tahay si aad ula kulanto hadafyadaaga SoundCloud.
Goorma ayaan helayaa SoundCloud SoundCloud?
Amarrada oo dhan waxay bilaabanayaan saacadaha 24-72 ka dib markaad amartid. Xaaladaha intooda badan, warbixintaada SoundCloud oo dhan waa la bixiyaa dhawr saacadood gudahood amarkaaga la dhigayo, laakiin mararka qaarkood waxay qaadan kartaa maalin ama laba maalin dheeraad ah, taas oo ku xiran tirada aad amartay.
Waxaan u soo bandhigi doonaa Instagrafikkeena si dhakhso ah, markaa waxaad ku heli doontaa waqti go'an.
Adeegyadayadu waa 100% ammaan ah in la isticmaalo. Si ka duwan adeeg-bixiyeyaasha adeegsadaha badan kama codsaneyno ama u baahannahay lambarkaaga Aqoonsiga Lambarka Bulshada. Sidaa daraadeed, ma xakamaynayno xisaabtaada ama kugula talin doonin wax kasta oo ay tahay inaanu sameyn. Adeegyada aan bixino waa la tijaabiyaa waqtiyo aan tirooyin lahayn oo sii wadaan cusbooneysiinta iyo horumarinta codsiyada warbaahinta bulshada si loo xaqiijiyo natiijada tayada ugu sareysa iyo kuwa ugu fiican.
Shabakada SoNuker.com waxay soo bandhigtay adeegyadeena ugu sarreeya uguna hal-abuurka badan adeegyada Suuqgeynta Bulsho ee Warbaahinta.
Service 1000 Saacado Watch YouTube ($ 300) 2000 Saacado Watch YouTube ($ 450) 3000 Saacado Watch YouTube ($ 550)
Ku dar gaadhigii Ku dar gaadhigii Ku dar gaadhigii
SoundCloud Reposts ayaa lagu daray gaadhigaaga.
100 Ciyaar ($ 10) 200 Ciyaar ($ 15) 500 Ciyaar ($ 30) 1000 Ciyaar ($ 45) 2000 Ciyaar ($ 80) 5000 Ciyaar ($ 150) 10000 Ciyaar ($ 275) 20000 Ciyaar ($ 500) 50000 Ciyaar ($ 900)
100 jecel yahay ($ 15) 200 jecel yahay ($ 30) 500 jecel yahay ($ 45) 1000 jecel yahay ($ 80) 2000 jecel yahay ($ 160) 5000 jecel yahay ($ 300) 10000 jecel yahay ($ 500) 20000 jecel yahay ($ 900) 50000 jecel yahay ($ 1500)
100 Soo Dejin ($ 10) 200 Soo Dejin ($ 15) 500 Soo Dejin ($ 30) 1000 Soo Dejin ($ 45) 2000 Soo Dejin ($ 80) 5000 Soo Dejin ($ 150) 10000 Soo Dejin ($ 275) 20000 Soo Dejin ($ 500) 50000 Soo Dejin ($ 900)
Sidee loo adeegsadaa waxyaabaha ay isticmaaleyaashu soo saareen suuqgeynta YouTube-ka?
Dhammaan waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Hashtag Optimization on YouTube
Aaladaha YouTube ee ugu Wanaagsan ee Smes ay tahay inay Adeegsadaan Maanta
Talooyin si aad u ogaato Dhagaystayaashaada Suuqgeynta YouTube -ka
Talooyinka Suuqgeynta Xiriirinta ee Abuurayaasha Mawduuca YouTube